ကျောခိုင်းခံရတဲ့ မြန်မာပြည်က စုပြုံသတ်ဖြတ်မှု | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဦးရဲထွတ်… ဘာသာရေးလက်နက်အသုံးပြုတဲ့ နိုင်ငံရေး ခြေထိုးမှုဆိုတာ အောက်တန်းကျလွန်းပါတယ်..
Anti-MyanmarMuslim Riots in Meiktila2»
ကျောခိုင်းခံရတဲ့ မြန်မာပြည်က စုပြုံသတ်ဖြတ်မှု
Swe Mon “ကျောခိုင်းခံရတဲ့ မြန်မာပြည်က စုပြုံသတ်ဖြတ်မှု”
(ဘာသာပြန် သတင်းဆောင်းပါး အစအဆုံး)
မူရင်းဆောင်းပါး- The Japan Times
ဖုန်တွေသဲတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ ဦးခေါင်းခွံ အပိုင်းအစတွေ၊ သွားတွေတွဲလျက်ရှိနေသေးတဲ့ မေးရိုးတစ်စုံရဲ့ အကျိုးအပဲ့တွေ၊ ၀ါးရင်းတုတ်နဲ့ရိုက်နှက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး မြေပေါ်လဲကျခိုက် အရှင်လတ်လတ်ဓာတ်ဆီလောင်းမီးရှို့ခံလိုက်ရတဲ့ ရုပ်အလောင်းတွေ လဲလျောင်းနေကြပါတယ်။
မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း၊ မိတ္ထီလာမြို့ပေါ်၊ မတ်လ နံနက်ခင်းမှာ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးသတ်ခံရတယ်ဆိုပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာလူအုပ်စုတွေ ဒေါသပေါက်ကွဲသွားကြတယ်။ ကယ်တင်နိုင်ပါလျက်နဲ့ ဓားစားခံဖြစ်သွားသူများကတော့ အစဉ်အလာရှိတဲ့အစ္စလာမ့်ကျောင်းတစ်ကျောင်းက ဆရာနဲ့ကျောင်းသားတွေ ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ သူတို့ဟာ အဲ့ဒီအမှုနဲ့ ဘာမှမသက်ဆိုင်ကြတဲ့ မွတ်စ်လင်မ်တွေပါ။
သူတို့ရဲ့ရှင်သန်မှုနောက်ဆုံးအချိန်ပိုင်းလေးမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို စေလွှတ်ပြီး ကယ်ဆယ်စေခဲ့တယ်။ သူတို့ဟာ မီးလောင်နေတဲ့ကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာ ရှိနေပြီး ဒေါသထွက်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးက ၀ိုင်းရံထားတာ ခံနေရတယ်။ ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့ ခေါင်းပေါ်လက်တွေတင်လို့ ထွက်လာကြတဲ့အခါ လမ်းပေါ်မှာအသင့်ရပ်စောင့်နေတဲ့ ထရပ်ကားလေးစင်းပေါ် တက်စေခဲ့တယ်။
လမ်းတစ်ဝက်မှာတင် အဖြစ်အပျက်တစ်ခု ဖြစ်ပွားသွားတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးခေတ်လွန် ခေါင်းဆောင်များက ဒီမိုကရေစီရောင်နီသစ်ထွန်းလင်းရမယ်လို့ ကတိက၀တ်ပြုလိုက်တဲ့ နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း အရှေ့တောင်အာရှမှာ အမှောင်မိုက်ဆုံးနေ့ရက်များထဲက တစ်ရက်ပါဘဲ။ ဆယ်ကျော်သက်အများစုပါဝင်နေတဲ့ မွတ်စ်လင်မ် ၃၆ ဦးကို ရဲတွေ၊ ဒေသအာဏာပိုင်တွေရဲ့မျက်စေ့ရှေ့မှာတင် ခုတ်သတ်လှီးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လေ။ တာဝန်ရှိသူများက တားမြစ်ခြင်း အလျဉ်း မရှိခဲ့ကြဘူး။
ကာကွယ်မှုနဲ့တရားမျှတမှု မခံစားရဘဲ လူနည်းစုဘာသာရေးအုပ်စုဝင်တွေအပေါ် လျစ်လျူရှုခဲ့တဲ့ ဒီအဖြစ်အပျက်က -ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကတိက၀တ်ဟာ အပေါ်ယံသက်သက်သာဖြစ်ကြောင်း ပြသလိုက်တာပါဘဲ။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ လွှမ်းမိုးကြီးစိုးနေတဲ့ ဒီတိုင်းပြည်က သမ္မတဟာ သေဆုံးသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ၀မ်းနည်းကြောင်းပြောဆိုနှစ်သိမ့်ဖို့ မိတ္ထီလာကို လုံးဝ မလာရောက်ခဲ့ပေဘူး။ ဒီကုန်းစောင်းတွေရဲ့တစ်ဖက်ခြမ်းက ရုပ်အလောင်းပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အထောက်အထားစုဆောင်းဖို့၊ အခင်းဖြစ်နေရာကို ကြိုးတားထိန်းသိမ်းဖို့ ရဲဌာနက ဆောင်ရွက်ပြုလုပ်ခြင်း မရှိကြပါဘူး။ ကျောင်းသားတွေကို သေတဲ့အထိ ရိုက်နှက်ခုတ်ဖြတ်ပြီး မီးရှို့ခဲ့တဲ့ ဒုစရိုက်သား တွေဟာ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းက ကျူးလွန်တာမဟုတ်ကြောင်း အွန်လိုင်းပေါ်က ဗီဒီယိုကလစ်ပ် တွေက သက်သေ အဖြစ် ရှိနေကြပါတယ်။
တရားမျှတမှုကင်းမဲ့ခြင်းဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအကြား လွတ်လပ်စွာ ဒုစရိုက်ကျူးလွန်ဖို့၊ အကြမ်းဖက်မှု ပိုမို တိုးပွားလာဖို့ လမ်းကြောင်းပေးနေခြင်းသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီး နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များက ဆိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပြန်လည်ပြုပြင်ရေးကို အားသွန်ခွန်စိုက်လုပ်မဲ့အစား အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍအားလုံးမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့အာဏာသြဇာ တည်မြဲရေး၊ လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ရေးသာလျှင် အလေးထားနေတယ်ဆိုတဲ့ အရှိတရားကို လှစ်ဟပြသနေခြင်း ဖြစ်တယ်။
“ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ ဥပဒေစည်းမျဉ်းအားလုံးဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့အကျိုးအတွက်သာ ဖြစ်နေကြတယ်။ မွတ်စ်လင်မ်တွေအတွက် တရားမျှတမှုဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးထားတာမျိုး လုံးဝ မရှိတာကို ကျွန်မတို့သိပါတယ် ” လို့ မသီတာက ပြောပြပါတယ်။ မသီတာရဲ့ခင်ပွန်းက မိတ္ထီလာမှာ အသတ်ခံရသူများအနက် တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသော ရှင်သန်လွတ်မြောက်လာခဲ့သူများအတိုင်း မိမိရဲ့နာမည်ရင်းကို မဖော်ပြဖို့ သူမက မေတ္တာရပ်ခံထားခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သက်ဆိုင်ရာက သိရှိတာနဲ့ ခေါ်ယူနှိပ်စက်ပြစ်ဒဏ်ချမှာကို စိုးကြောက်နေရလို့ပါဘဲ။
မတ်(၂၁) စုပြုံသတ်ဖြတ်မှုအကြောင်းကို လုံးစေ့ပတ်စေ့ပြောပြနိုင်ဖို့အတွက် ရှင်သန်လွတ်မြောက်လာသူ ၇ ဦး အပါအ၀င် မျက်မြင်သက်သေ ၁၀ ဦးနဲ့ ဆက်သွယ်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ လုံခြုံရေးဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကြောင့် သူတို့ နေအိမ်ပြင်ပမှာ ဆုံစည်းခဲ့ကြရတယ်။
မြို့ခံလူတစ်ချို့ရဲ့ရိုက်ကူးတင်ပြထားတဲ့ နေ့ရက်၊ အချိန်မှတ်တမ်းပါ ဗီဒီယိုကလစ်ပ်တွေ၊ လူထုမီဒီယာမှတ်တမ်းတွေ၊ ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ဓာတ်ပုံတွေ၊ ပြည်တွင်းအာဏာပိုင်များရဲ့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်နဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကို ဘေးချလို့ အေပီသတင်းဌာနက သူတို့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကို အပြန်ပြန်အလှန်လှန် စိစစ်သုံးသပ်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
စုပြုံသတ်ဖြတ်ကြတဲ့နေ့မတိုင်မှီ တစ်ရက်အလို မင်္ဂလာဇေယုံအစ္စလာမ့်စာသင်ကျောင်းဘော်ဒါဆောင်ကသူတွေဟာ အရုဏ်မတက်ခင် အမှောင်ထုထဲကပျံ့လွင့်လာတဲ့ ၀တ်ပြုရေးဖိတ်ခေါ်သံကို ကြားခဲ့ကြရပါသေးတယ်။
မတ်လ ၂၀ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့။ အိပ်မှုန်စုံမွှားကျောင်းသား ၁၂၀ ဦးက မိမိရဲ့မျက်လုံးတွေကို ပွတ်သပ်ပြီး၊ နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ကြမ်းပြင်မှာ ကန့်လန့်ဖြတ်ခင်းထားတဲ့ ဖျာချပ်တွေပေါ်ကနေ ထလာကြတယ်။
မိတ္ထီလာမွတ်စ်လင်မ်ရပ်ဝန်းထဲက ရိုးရိုးစင်းစင်းကျောင်းဝင်းနံရံများရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ပုံရိပ်တစ်ခု ရှိနေတယ်။
အဲ့ဒီကျောင်းတက်ရောက်နေတဲ့ ဒေသတစ်ခွင်က ကျောင်းသားလေးတွေဟာ တစ်နေ့ကျယင် အစ္စလာမ့်ပညာရှင် သို့မဟုတ် ဓမ္မကထိက ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ ကလေးမိဘများရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ပါဘဲ။
ကျောင်းထဲမှာ ဘောလုံးကစားကွင်းတစ်ခု၊ ဗလီဝတ်ပြုဆောင်တစ်ခု နဲ့ ဆရာ ၁၀ ဦး ရှိတယ်။ လုံခြုံထိန်းသိမ်းမှု နဲ့ စည်းကမ်းကောင်းလှတယ်လို့ ကျော်ကြားတဲ့ ကျောင်း တစ်ကျောင်းဖြစ်တယ်။ စည်းကမ်းကြီးပေမယ့် ကြင်နာတတ်တဲ့ မုတ်ဆိတ်အမျှင်တန်းပိုင်ရှင် ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးက ကလေးတွေကို တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်သာ ပြင်ပထွက်ခွင့် ပေးတတ်ပါတယ်။ မိတ္ထီလာမြို့နေ လူပေါင်း တစ်သိန်းထဲက သုံးပုံတစ်ပုံဟာ မွတ်စ်လင်မ်တွေပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနဲ့လည်း ငြိမ်းချမ်းချစ်ခင်စွာ အတူနေထိုင်မှု ရှိခဲ့ကြတယ်။ (မြန်မာပြည်တပြည်လုံးမှာတော့ မွတ်စလင်မ် လူဦးရေဟာ စုစုပေါင်းလူဦးရေရဲ့ ၅% ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းကြပါတယ်။)
သို့သော်လည်း ယမန်နှစ်၊ ဇွန်လမှာ တစ်ကြိမ် နဲ့အောက်တိုဘာလမှာတစ်ကြိမ် အနောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူပေါင်း ရာဂဏန်းလောက် သတ်ဖြတ်ခံရပြီး တစ်သိန်းလေးသောင်းကျော် ဌာနီပျောက်အိုးအိမ်မဲ့ဘ၀ရောက်စေခဲ့တဲ့ တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက် မွတ်စ်လင်မ်တွေမှာ စိုးရိမ်မှုဝင်ရောက်လာလို့ သတိထားတဲ့အနေနဲ့ အဲ့ဒီကျောင်း (မဒရဆာ)ကို နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ယာယီပိတ်ပေးခဲ့သေးတယ်။
ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုရဲ့သားကောင်အဖြစ် ရိုဟင်ဂျာမွတ်စ်လင်မ်တွေကို ရည်ရွယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ သူတို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်နေထိုင်လာသူဖြစ်သည့်တိုင်အောင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များစွာက သူတို့အပေါ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက ခိုးဝင်လာသူများရယ်လို့ အမြင်ထားရှိနေကြတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးများဦးဆောင်တဲ့ ၀ါဒဖြန့်လှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ်ကြောင့် မွတ်စ်လင်မ်အားလုံးဟာ ဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုရဲ့ရန်သူများအဖြစ် အမြင်ရောထွေးလို့ မုန်းတီးစိတ်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။
မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ ကျောင်းစတက်ချိန်မှာတော့ ကျောင်းသားတွေအကြား သတင်းအချို့ကြားသိပြောဆိုနေကြတယ်။ မြို့တစ်ဖက်ခြမ်းက မွတ်စ်လင်မ်ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ဦး နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရွှေရောင်းသူတို့ အချင်းများရာကနေ ရာဂဏန်းရှိ လူအုပ်ဟာ ဆိုင်ကိုဖျက်ဆီးမီးရှို့တဲ့ အကြောင်းကိစ္စပါ။
အဲ့ဒီနေ့ နေ့လည်ကျတော့ မွတ်စ်လင်မ်အမျိုးသားတစ်စုက ဆိုင်ကယ်တစ်စီးပေါ်ပါလာတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးကို ဆွဲချပြီး မီးရှို့သတ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုတယ်။ အဲ့ဒီနောက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူရမ်းကားတွေက အတုန့်အလှည့်အားဖြင့် မွတ်စ်လင်မ်တွေရဲ့ဆိုင်တွေ၊ လုပ်ငန်းတွေကို ဦးတည်ဖျက်ဆီးပါတော့တယ်။ မြို့ပေါ်မှာ ဗလီ ၁၃ လုံးရှိတဲ့အနက် ၁၂ လုံး ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတယ်။
မင်္ဂလာဇေယုံမှာ ဆရာတစ်ချို့ စာသင်တာ ရပ်ဆိုင်းပြီး အတန်းအားလုံးကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်။
ကျောင်းသားတွေဟာ ကျောင်းဆောင် ဒုတိယထပ်ဆီကို အပြေးအလွှားသွားရောက်ပြီး ပြူတင်းပေါက်တွေကနေ တုန်လှုပ်စွာ နဲ့ ငေးမောကြည့်ရှုနေကြတယ်။ လေထုထဲမှာ မည်းနက်နေတဲ့ မီးခိုးမှိုင်းလုံးတွေ အလိပ်လိုက် တက်လာနေတဲ့ မြင်ကွင်းကိုပေါ့။
နှစ်နာရီကြာပြီးတဲ့နောက် ညဉ့်စာစားသောက်ချိန် စားသောက်ဆောင်ထဲမှာ ဆရာတစ်ဦးရဲ့ငိုရှိုက်သံ ဖုံးလွှမ်းသွားတယ်။
မီးလောင်ကျွမ်းတဲ့ သူ့မိသားစုအိမ်လေးထဲမှာ သူ့မိဘနှစ်ပါးလုံး ပါသွားခဲ့လို့ပါဘဲ။ ကျောင်းသားတစ်ချို့ဟာ မျိုမကျနိုင်တော့တဲ့ အစားအစာကို တွန်းဖယ်လိုက်ကြကုန်တယ်။
အပူရှိန်ပြင်းကောင်းကင်ထဲ နေမင်းကြီး မ၀င့်တ၀င် ငုပ်လျှိုးချိန်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အစိုးရအရာရှိတစ်ဦးက ကျောင်းဆောင်အ၀င်ဝဆီ ရောက်လာပြီး ကျောင်းအုပ်ကို သူ့အနားခေါ်ယူလိုက်တယ်။
“ ခင်ဗျားရဲ့ကျောင်းသားတွေကို ဒီကနေ ခေါ်ထုတ်သွားပါ။ သူတို့ကို ဖွက်ထားဖို့လိုပြီ။ လူရမ်းကားတွေ ဒီညဉ့် လာလိမ့်မယ် ” လို့ သတိပေးပြောကြားလိုက်တယ်။
နေ၀င်ဆည်းဆာဝတ်ပြုချိန်ရောက်တော့ ကျောင်းအုပ်က ကျောင်းသားအားလုံးကို မှာကြားတယ်။ မိမိတို့ရဲ့အဖိုးတန် ပစ္စည်း၊ ငွေကြေး၊ မှတ်ပုံတင်တွေသိမ်းဆည်းပြီး ထွက်ခွာသွားကြဖို့ပါ။ ဒါ့အပြင် မွတ်စ်လင်မ်အဖြစ် သိရှိသတိထားမိစေမယ့် ဗလီဦးထုပ်၊ ၀တ်စုံ နဲ့ အဆောင်အယောင်မှန်သမျှ မဆင်ယင်ကြဖို့ကိုပါ ခိုင်းစေခဲ့တယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ ပြောစရာမလိုတော့တဲ့အတွက် ရှင်းပြမနေတော့ဘူး။
အမှောင်ထုကြီးစိုးလာတဲ့အခါ သူတို့ဟာ တစ်မျှော်သာသာနေရာက ၀က်လန်တောလို့ခေါ်တဲ့ မြက်ပင်ရှည်ဗွက်တောထဲကို အသံမထွက်အောင် တိတ်တဆိတ် သွားရောက်ပုန်းအောင်းခဲ့ကြတယ်။ မြက်ပင်ရှည်များက ဒုက္ခသည်ကျောင်းသားအားလုံးကို ဖုံးလွှမ်းထားခဲ့တယ်။
သူတို့အများစုက ကျောင်းသားနဲ့ဆရာတွေဖြစ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်အပါအ၀င် လူ ၁၀ ဦးကျော်လည်း သူတို့နဲ့အတူ လိုက်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာ ကျောင်းသားဆရာတွေရဲ့အမျိုးတွေလည်း ပါသလို ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ယာမှာမနေရဲအောင် ထိတ်လန့်တဲ့လူတစ်ချို့လည်း ပါဝင်တယ်။
သူတို့အားလုံး စကားတစ်ခွန်းတစ်ပါဒမှ မပြောဆိုကြဘဲ ရွှံ့ညွှန်ထဲမှာ ထိုင်နေခဲ့ကြတယ်။
သိပ်မကြာခင်မှာဘဲ ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ ရာဂဏန်းရှိ လူအုပ်ကြီးက ကျောင်းရှေ့ကိုရောက်လာကြပြီး မကြားဝံ့မနာသာ ဟစ်အော်သံတွေကြားရတယ်။ သူတို့ရဲ့ဒေါသတွေ အရှိန်တက်ဆူပွက်နေကြတယ်။
ကျောင်းရှေ့မှာ အသံဗလံတွေ ဆူညံပွက်လောရိုက်ပြီးနောက် လူအုပ်ကြီးဟာ ကျောင်းထဲ ၀င်သွားကြတယ်။ တံခါးတွေကို ဆောင့်ကန်ပြီး ပြူတင်းပေါက်တွေကို ရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးသံတွေ ကြားလိုက်ရတယ်။
မြက်တောထဲကအမှောင်ထုမှာ ရှဖီးအ် လို့ခေါ်တဲ့ဆရာတစ်ယောက် အစာအိမ်နာတဲ့ဒဏ် ခံနေရတယ်။ ဇနီးသည်ယူလာတဲ့ ပရုပ်ဆီလေးပွတ်ပြီး ဗိုက်ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖိကိုင်ထားတဲ့ကြားက စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ ခပ်တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်တယ်။
“ ငါတို့ကို သူတို့ တွေ့သွားယင် မလွယ်ဘူး။ ငါ ထမပြေးနိုင်တော့တာ မင်းသိပါတယ်နော် ”။
သုံးနှစ်သား ကလေးကိုလက်ထဲပွေ့ချီထားတဲ့ဇနီးဖြစ်သူ မသီတာက “ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ကျွန်မတို့အတူရှိနေကြမယ်။ ကျွန်မ ရှင့်ကို ဘယ်တော့မှ ထားခဲ့မှာ မဟုတ်ဘူး ” လို့ အားပေးရှာပါတယ်။
ရှည်လျားတဲ့ညဉ့်တာအတွင်းမှာ ကျောင်းကြီး မီးလောင်ပြာကျသွားတယ်။
နံနက် ၄ နာရီ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ တုံးခေါက်သံထွက်လာချိန်မှာပေါ့။ လူရမ်းကားအုပ်စုဟာ မြက်တောနားရောက်လာပြီး လက်နှိပ်ဓာတ်မီးနဲ့ထိုးရှာကြတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အချို့က လက်လုပ်မီးကွင်းတွေကို ခြုံအုပ်ထဲ ပစ်သွင်းကြတယ်။ “ ကုလားတွေ၊ ထွက်လာခဲ့ကြစမ်း ” လို့ မွတ်စ်လင်မ်တွေအပေါ် ချိုးနှိမ်ဖိနှိပ်တဲ့စကားလုံးနဲ့သူတို့ ဟစ်အော်နေကြတယ်။
မွတ်စ်လင်မ်တွေဟာ အနီးနားက မွတ်စ်လင်မ်လူချမ်းသာလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးပိုင်အိမ်ဝင်းဆီ ပြေးကြတယ်။ တစ်ချို့က ၀ါးကပ်စည်းရိုးကို ချိုးဖြဲပြီး ပြေးဝင်သွားကြတယ်။ လူရမ်းကားအုပ်စုတွေက ထပ်ကြပ်မကွာ လိုက်လာကြတယ်။
မသီတာဟာ မိမိရဲ့နောက်က ကလေးငယ်တစ်ဦးရဲ့ စူးစူးဝါးဝါး အော်သံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ အဲ့ဒီကောင်လေးဟာ သူ့လက်ကိုင်ဖုန်းလေးနဲ့ သူ့မိခင်ကို ခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။ ဆက်မပြေးနိုင်တော့လို့ စက္ကန့်ပိုင်းလောက် ရပ်နားလိုက်မိတာလေ။
မင်္ဂလာဇေယုံဆီ အရုဏ်အလင်း စတင်သက်ရောက်လာချိန်။ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် လူကောင်ထွားထွား အေးအေးဆေးဆေးနေတတ်တဲ့ ကျောင်းသားလေး မောင်ကိုကိုဟာ ကျောင်းဝင်းရဲ့ခြံစည်းရိုးကြားထဲကနေ ချောင်းကြည့်လိုက်တော့ တုန်လှုပ်မိန်းမောသွားရှာတယ်။ ပြင်ပကလူတွေ မီးကွင်းတွေ၊ တုတ်တွေ ဆွဲကိုင်လို့ တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်နေကြတာကိုး။
မတ်စောက်တဲ့ကုန်းစောင်းဘေးကလမ်းပေါ်မှာ စုရုံးနေကြတာ လူတစ်ရာကျော်လောက်ရှိမယ်။ အဲ့ဒီကုန်းစောင်းဟာ နဂိုကတည်းကရှိနေခဲ့ပေမယ့် ခုအချိန်မှာတော့ သူတို့ဟာ ဧရာမဒယ်အိုးတစ်ခုထဲ ရောက်နေသလိုဖြစ်တဲ့အတွက် ထွက်မပြေးနိုင်အောင် ပိတ်မိသွားရပါပြီ။
မောင်ကိုကိုအဖို့ ပါးပြင်နှစ်ဖက်ကနေ သွေးတွေစိမ့်ထွက်လာသလားလို့တောင် ခံစားမိပြီး အားအင်တွေ ဆုတ်ယုတ်ကုန်တယ်။ “ ငါတို့ဟာ တိရစ္ဆာန်တွေလို ပိတ်လှောင်ခံရပြီ ” လို့ အတွေးဝင်လာလေရဲ့။
ကျောင်းသားအချို့က သွေးရူးသွေးတန်းနဲ့ မိဘတွေ၊ ရဲတွေကို အကူအညီတောင်း အော်ဟစ်ခေါ်ယူကုန်ကြတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ကြွေးကြော်မှုတွေ ပြုကြတယ်။ ကျန်သူတွေကတော့ ပြင်ပကလူရမ်းကားတွေ ပစ်သွင်းလာတဲ့ ခဲလုံးတွေကနေ မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ သစ်သားဗီရို စတဲ့ ရရာပစ္စည်းတွေကို ရွှေ့တွန်းနေရာချကုန်ကြတယ်။
နံနက် ၇း၃၀ နာရီလောက်မှာ အတိုက်အခံဥပဒေသမားဖြစ်တဲ့ ဦးဝင်းထိန် ရောက်လာတော့ အဓိကရုဏ်းနှိမ်နှင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် အတော်များများကို ခေါင်းစွပ်တွေနဲ့တစ်ကွ တွေ့ရတယ်။ လုံထိန်းတွေမှာ ရိုင်ဖယ်သေနတ်တွေ၊ မီးခိုးရောင် ဒိုင်းလွှားတွေ ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူအုပ်ကြီးကို မွတ်စ်လင်မ်တွေဆီ မရောက်အောင် ကြားထဲမှာ တန်းစီပြီး ထိန်းသိမ်းထားကြတယ်။
အနီးအနားမှာရပ်ကြည့်နေတဲ့ ရဲဌာနအုပ်နဲ့ခရိုင်မှူးကို ဦးဝင်းထိန် တွေ့ခဲ့ရတယ်။ မြက်တောအုပ်အစွန်မှာ မွတ်စ်လင်မ် ရုပ်အလောင်းနှစ်ခုကိုလည်း မြင်လိုက်ရတယ်။ နောက်ထပ် ၄၅ မိနစ်အကြာကျတော့ လူအုပ်ကြီးထဲက အမျိုးသားတွေဟာ ခြုံပုတ်ထဲကနေ ကျောင်းသားငါးဦးထက်မနည်း ဆွဲထုတ်လာတယ်။ နေ့ခင်းကြောင်တောင်ကြီးမှာ တစ်ဦးချင်းစီကို မသေမချင်း ရိုက်နှက်ခုတ်ပိုင်းနေကြတာကို သွေးပျက်စဖွယ် တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။
ရဲအရာရှိတွေဟာ အခင်းဖြစ်နေရာနဲ့ ခြေလှမ်းအနည်းငယ်အကွာအဝေးမှာ ခံစားချက်ကင်းမဲ့တဲ့မျက်နှာနဲ့တစ်ကွ အရုပ်တွေလို ရပ်နေခဲ့ကြတယ်။ လူအုပ်ကြီးကလည်း ရောမခေတ် လူသတ်ကွင်းကပရိသတ်တွေလို ၀ိုင်းဝန်းသြဘာပေးနေခဲ့တယ်။
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က “ သူတို့ကို အပြတ်သာရှင်းပစ် ” လို့ အော်ဟစ်တယ်။ နောက်တစ်ဦးကလည်း “ သူတို့အားလုံးကို သတ်သာသတ်။ ငါတို့အားလုံး ဗမာ့သတ္တိပြရမယ် ” လို့ ဟစ်ကြွေးပြန်တယ်။
ဦးဝင်းထိန်မှာ ပျို့အန်တော့မတတ် ခံစားလိုက်ရတယ်။ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်လှတဲ့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာ ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခု အကျဉ်းကျနှိပ်စက်ခံခဲ့ရသည့်တိုင်အောင် ဒီလိုအဖြစ်မျိုး လုံးလုံးလျားလျား မတွေ့မြင်ခဲ့ဖူးလို့ဖြစ်တယ်။
ဒါနဲ့ သူက မွတ်စ်လင်မ်တွေကို အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးကြဖို့ လူတွေကို ဖြောင်းဖျတဲ့အခါ လူရမ်းကားအုပ်စုတွေက သူ့အပေါ် အန္တရာယ်ပြုမတတ်ဖြစ်ကြတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်ကဆိုယင် “ သူတို့ကို ကာကွယ်ဖို့ ခင်ဗျား ဘာလို့ကြိုးစားနေရတာလဲ။ ဘာလဲ – ခင်ဗျားက မွတ်စ်လင်မ်တွေကို ချစ်မြတ်နိုးနေသူလား ” ဆိုပြီး တူးတူးခါးခါးကို ပြောဆိုလာတယ်။ ရဲအရာရှိတစ်ယောက်က ဦးဝင်းထိန်ကို ရှောင်စေလိုက်တယ်။
ခဏတဖြုတ်နေပြီးတဲ့အခါ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးနဲ့အတူ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် လေးဦး ရောက်လာကြတယ်။ ပိတ်မိနေတဲ့ မွတ်စ်လင်မ်တွေကို လမ်းလျှောက်ထွက်လာပြီး ကုန်းစောင်းပေါ်က ရဲကားတွေဆီ ကာကွယ်ပို့ဆောင်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်။
“ ငါတို့ မင်းတို့ကို ကာကွယ်ပေးမယ်။ ဒါပေမယ့် ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ ကြွေးကြော်တာကို ရပ်လိုက်ပါ။ ခဲလုံး၊ တုတ် စတဲ့ လက်နက်တွေကို လွှတ်ချလိုက်ပါ ” လို့ အရာရှိတစ်ဦးက ပြောဆိုတယ်။
ဆရာတွေက ဘာဆက်လုပ်မလဲလို့ အငြင်းအခုံ ဖြစ်ကြတယ်။ ဘေးကြပ်နံကြပ်အချိန်ဆိုတာ သူတို့ နားလည်ကြတယ်။
လူအုပ်ကြီးက ၀ါးလုံးရှည်ကို မီးစာတွေနဲ့တွဲရှို့လို့ စည်းရိုးကိုကျော်ပြီး ပစ်သွင်းနေကြတယ်။ ဧရာမမီးခြစ်ဆံလိုမျိုးပေါ့။ ကျောင်းဝင်းကြီးမှာ လိမ္မော်မီးတောက်တွေ ထတောက်လာပြီး မည်းနက်တဲ့မီးခိုးလုံးတွေ လေထုထဲ လိပ်တက်လာကြပြီ။
အဲ့ဒီနောက် မွတ်စ်လင်မ်တွေဟာ စစ်အကျဉ်းသားတွေလို ခေါင်းပေါ်လက်တင်လို့ ကိုယ်စီထွက်လာခဲ့ကြရတယ်။
စားတော့ဝါးတော့မတတ် ၀ိုင်းရံနေကြတဲ့လူတန်းကြီးကြားက ဖုန်ထူလမ်းကျဉ်းလေးအတိုင်း သူတို့ကို ရဲတွေ ဦးဆောင်ခေါ်ထုတ်သွားတယ်။ ချက်ခြင်းဆိုသလို လမ်းပိတ်ထားဖို့ အသင့်စောင့်ဆိုင်းနေကြတဲ့ ဒေါသအိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူတစ်စုက သူတို့ကို ခဲတွေနဲ့ဝိုင်းပစ်ခဲ့ကြတယ်။
နောက်က တသီတတန်းကြီးလိုက်လာကြသူများဟာ ငရဲခန်းအစောင့်တွေလား မှတ်ရတယ်။ မပြေးလိုက်နဲ့- အမိဖမ်းမယ်၊ မလဲကျလိုက်နဲ့ – ပြန်ထလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ မရပ်လိုက်နဲ့- အသက်ပျောက်သွားမယ် ဆိုတဲ့ သွေးပျက်စရာကောင်းလွန်းတဲ့စည်းမျဉ်းတွေကြားကနေ တန်းစီထွက်လာရသလိုပါဘဲ။
ရဲတွေကို သေနတ်ကို မိုးပေါ်ထောင်လို့ အချက်ပေါင်းများစွာ ပစ်ဖောက်နေပေမယ့်လည်း လူအုပ်ကတော့ တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြတယ်။ ဆရာတစ်ဦးမြေပေါ်လဲကျသွားတယ်။ တုန်လှုပ်ချောက်ခြားနေတဲ့ ကျောင်းသားများက သူ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ် တက်နင်းလျှောက်လှမ်းသွားရတဲ့အခါ သူ့မျက်နှာတစ်ခုလုံး မြေကြီးထဲ ပြားပြားဝပ်ထားခဲ့ရတယ်။
သူငယ်ချင်းတစ်ဦးရဲ့နဖူးကို ထွန်ခြစ်တစ်ခုထိမှန်သွားတာ တွေ့ရတော့ မောင်ကိုကိုဟာ သူ့ကို ဆွဲထူဖို့ကြိုးစားတော့ ဒါးကိုင်ထားတဲ့ အမျိုးသားငါးဦးက သူ့ကိုမြေပေါ်ဆွဲချလိုက်တယ်။ အဲ့ဒီနောက် လူအုပ်ကြီးက သူ့ကိုဓားတွေနဲ့ အနောက်ကနေ ၀ိုင်းခုတ်ကြတယ်။ သူ့ကျောပြင်မှာ ဓားဒဏ်ရာနက်နက် ခြောက်ချက်ရသွားပြီး သူ့အင်္ကျီအ၀ါရောင်လေး သွေးတွေရွှဲရွှဲစိုသွားကုန်တယ်။ လဲကျသွားပြီး မှောင်အတိကျသွားခဲ့တယ်(မေ့မြောသွားခဲ့တယ်)။
ရဲအရာရှိတစ်ဦးရဲ့မျက်နှာကို ခဲတစ်လုံးလာမှန်တော့ မတော်တဆ သေနတ်မောင်းဖြုတ်မိသွားတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူရမ်းကားတစ်ဦးရဲ့ခြေထောက်ကို ထိမှန်သွားခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီသေနတ်သံက မောင်ကိုကို့ကို သတိရလာစေတယ်။ မသေသေးဘူးဆိုတာသိတာနဲ့ ကုန်းရုန်းထပြီး ရှေ့လူအုပ်နောက် အမြန်ပြေးလိုက်ခဲ့ရပါတယ်။
ထရပ်ကားတွေဆီသွားရာလမ်းတစ်ဝက်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူအုပ်အကြားထဲ မောင်းသွင်းခံရတယ်။ ရဲတွေက မွတ်စ်လင်မ် တွေကို မြေပြင်ပေါ် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ခိုင်းကြတယ်။
လူအုပ်ကြီးက သူတို့ကို ၀ိုင်းဝန်းလှောင်ပြောင်ဆဲဆိုပြီး ပါးရိုက်ကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ဦးခေါင်းတွေကို အမျိုးသမီးအများအပြားက အဓမ္မ၀ပ်တွားစေပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ လက်အုပ်ချီရှိခိုးဦးချသလို လုပ်ခိုင်းခဲ့ကြတယ်။ သူတို့တစ်တွေဟာ အစ္စလာမ်က မစားရလို့တားမြစ်ထားတဲ့ဝက်သားတွေကို မွတ်စ်လင်မ်တို့ရဲ့ ပါးစပ်ထဲ ထိုးထည့်ခဲ့ကြသေးတယ်လို့ လူ့အခွင့်အရေးကျွမ်းကျင်သူများမှ စုစည်းကောက်ယူထားတဲ့ သက်သေထွက်ချက်ထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကျောင်းသားတစ်ဦးရဲ့ဦးခေါင်းကို အမျိုးသားတစ်ဦးက မော်တော်ဆိုင်ကယ်အိပ်ဇောပိုက်နဲ့လွှဲရိုက်တယ်။ နောက်လူတစ်ဦးက ဆိုင်ကယ်ချိန်းကြိုးနဲ့ ထပ်ရိုက်ပြီး၊ တတိယလူက ရင်ဘတ်ကို ဓားနဲ့ထိုးချလိုက်တယ်။
“ သူတို့ကို ဒီမှာ မသတ်နဲ့။ သူတို့ဝိညာဉ်တွေ ဒီနေရာမှာ စွဲပြီး မကျွတ်ဘဲနေလိမ့်မယ်။ သတ်ချင်ယင် လမ်းပေါ်ရောက်မှ သတ်ကြ ” ဆိုပြီး ဘုန်းကြီးတစ်ဦးက အဲ့ဒီလူတွေကိုအော်ငေါက်ခဲ့တယ်။
အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကို ၀ိုင်းရံပြီး အယင်ခေါ်ထုတ်သွားဖို့ ဘုန်းကြီးတွေက ရဲတွေကို ခိုင်းစေခဲ့တယ်။ မသီတာက သူ့ခင်ပွန်းကိုဆွဲထုတ်ဖို့ငြင်းဆန်တဲ့အခါ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသားတစ်ယောက်က သူ့မျက်နှာကို လက်ဝါးနဲ့တွန်းဖယ်ပြီး ခွဲထုတ်လိုက်တယ်။ နောက်လူတစ်ဦးက သုံးနှစ်အရွယ်သူမရဲ့သားကလေးကို ကြမ်းတမ်းစွာ ဖျစ်ညှစ်ခဲ့လို့ သူမက “ သူနို့စို့အရွယ်ပဲ ရှိသေးတယ်။ သူ့ကိုလွှတ်ပေးပါ ” လို့ အော်ဟစ်ပြီး ဆွဲပြေးခဲ့ရတယ်။
ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ရှုပ်ထွေးနေချိန်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးက မသီတာရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်သမီးနှစ်ဦးကို ကမန်းကတန်းဆွဲခေါ်ထုတ်သွားတယ်။ မေတ္တာကရုဏာနဲ့ သူမအိမ်ကို ခေါ်ယူသွားပြီး စောင့်ရှောက်ပေးထားခဲ့တယ်။ ရက်အတန်ကြာတဲ့နောက် သူမနဲ့သမီးနှစ်ဦးတို့ဟာ အန္တရာယ်ကင်းစွာနဲ့ ပြန်လည်ဆုံစည်းနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
မသီတာနဲ့အတူ အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေ ၁၀ဦးလောက်က တောင်ကုန်းပေါ်တက်နေကြချိန်မှာ တုတ်တရမ်းရမ်းနဲ့ ၀ိုင်းရံနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကို လုံထိန်းရဲတွေက လက်ချည်းဗလာနဲ့ တွန်းထုတ်နေကြလေရဲ့။ အေပီသတင်းဌာနရဲ့ မှတ်တမ်းဗီဒီယိုတစ်ခုမှာ လူတစ်ဦးက “ မလုပ်ကြနဲ့။ အဲ့ဒီထဲမှာ ကလေးတွေလည်း ပါနေတယ် ” လို့ လူအုပ်ကြီးကို ဟစ်အော်တားဆီးတာ တွေ့ရတယ်။
ဒါပေမယ့် အကြမ်းဖက်မှုက ဆက်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက ၀က်လန်တောကို ဆက်ရှင်းကြတယ်။ အရွတ်ခန်း လို့ခေါ်တဲ့ ပိန်ပိန်ပါးပါး အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသားလေးကို မြက်ခင်းပြင်ပေါ် ဆွဲထုတ်လာကြတယ်။ ဗီဒီယိုမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာ အမည်မသိလူငယ်နှစ်ဦးထက်မနည်း ပါဝင်ကြောင်း တွေ့ရတယ်။ အဲ့ဒီထဲက ဘောလုံးဝါသနာအိုး မိတ္ထီလာမြို့ခံတစ်ဦးဟာဆိုယင် တုတ်ရှည်တွေ၊ သွေးစွန်းဓားတွေကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ လူကိုးဦးက ၂၄ ချက်အထိ ရိုက်နှက်ထိုးခုတ်ခဲ့တယ်။ ဘုန်းကြီးတစ်ဦးက ငါးချက်တိတိ ပါဝင်လက်စွမ်းပြခဲ့တယ်။
ကျောင်းသားလေးကို သတ်ဖြတ်နေစဉ် ပွဲကြည့်ပရိသတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးက ကုန်းစောင်းပေါ်ကနေ “ ကြည့်ကြပါဦး၊ ဟိုမှာ ဟိုမှာ ” လို့ အော်ဟစ်ခဲ့တယ်။ “ ရဲတွေက အဲ့ဒီနေရာကို ဆင်းသွားကြပေမယ့် ဘာမှ မဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြဘူး ”။
သူမရဲ့ခင်ပွန်းကို မသီတာ နောက်ဆုံးမြင်တွေ့လိုက်ရပုံက ဒီလိုပါ။ ခင်ပွန်းသည် ရှဖီးအ်ဟာ ရဲတွေရဲ့ဘေးမှာ မျှော်လင့်တကြီးရပ်စောင့်နေတဲ့ သူမရှိရာ တောင်ကုန်းလမ်းအတိုင်း ခက်ခက်ခဲခဲ တက်လာနေခဲ့တယ်။ သူ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ ဆရာနှစ်ဦးက ထိန်းကိုင်ထားပေးနေကြတယ်။ ရှဖီးအ်ရဲ့မျက်နှာက သွေးဆုတ်ဖြူရော်နေပါပြီ။ ခြေကုန်လက်ပန်းကျနေပြီး လွတ်လမ်းမမြင်နိုင်ရှာတော့ပါဘူး။ အဲ့ဒီအခိုက်မှာ သူမတို့နဲ့ သူတို့အကြား တောင်စောင်းမှာ လူအုပ်ကြီး ဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့တယ်။ တောင်ကုန်းတစ်ဖက်ခြမ်းကနေ “ ကုလားတွေကိုသတ်၊ တစ်ယောက်မှ ချန်မထားနဲ့ ”၊ “ သူတို့ကိုအပြတ်ရှင်းပစ်၊ သူတို့ဟာ အယုတ်တမာတွေဘဲ ” ဆိုတဲ့ အမုန်းတရားဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ အော်သံတွေကိုသာ မသီတာ ကြားလိုက်ရပါတော့တယ်။
အဲ့ဒီအောက်ဖက် အချို့နေရာမှာ ကျောင်းသားအများအပြားက အလွတ်ရုန်းထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်။ သူတို့ကို လူအုပ်တွေက လိုက်ဖမ်းခဲ့ကြတယ်။
လူတစ်ဦးက အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် အဗူဗကရ်ရဲ့ပါးစောင်းကို ၀ါးရင်းတုတ်နဲ့ မနားမနေဆက်တိုက် ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်။ နောက်တစ်ဦးက နှစ်ဖက်ချွန်ဓားမြှောင်နဲ့ ခြေထောက်နောက်ပိုင်းကို ထိုးခွဲဖြတ်တောက်နေခဲ့တယ်။ ဒီအဖြစ်တစ်ရက်အကြို ညစာစားချိန်မှာ ငိုကြွေးခဲ့တဲ့ ကျောင်းဆရာ အာရိဖ်ကိုတော့ နောက်တစ်ယောက်က အဖန်တလဲလဲ ရိုက်နှက်နေခဲ့တာ မြေပြင်ပေါ်လဲကျသွားတဲ့အထိပါဘဲ။
တောင်ကုန်းရဲ့နှစ်ဖက်စလုံးမှာ ရဲတွေက ဘာမှမလှုပ်မရှား ရပ်ကြည့်နေခဲ့ကြတယ်။ တောင်စောင်းအောက်ဖက်မှာ သူတို့နဲ့အတူထိုင်နေတဲ့ ချာတိတ်လေးတစ်ယောက်က အပေါ်ကိုမော့ကြည့်လိုက်တော့ အရာရှိတစ်ယောက်က ကလေးရဲ့ခေါင်းကိုဖိချပြီး “ မင်းမျက်လုံး အပေါ်လှန်မကြည့်နဲ့ ” ကို အော်ငေါက်ခဲ့တယ်။
အသား မီးလောင်ကျွမ်းတဲ့အနံ့တွေ ရလာတော့ မသီတာဟာ အနီးမှာရပ်နေတဲ့ ရဲအရာရှိခြေကိုဖက်ပြီး “ အစ်ကိုရေ။ လုပ်ပါဦး။ ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲ။ ကျေးဇူးပြုပြီး …….. ” လို့ဆိုတဲ့အခါ အရာရှိက “ ဒီမိန်းမ၊ ပါးစပ်ပိတ်ထားစမ်း၊ ခေါင်းကိုငုံ့ထား၊ မင်းတို့ပါ ဒီနေရာမှာတင် သေသွားနိုင်တယ်ဆိုတာ မသိဘူးလား ” လို့ ဖြေကြားလိုက်ပါတယ်။
အခြေအနေအနည်းငယ်ငြိမ်သက်သွားတော့မှ ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ ရဲတပ်သားတွေက တောင်ထိပ်ပေါ်နောက်ဆုံးကျန်မွတ်စ်လင်မ်တွေကို ကာကွယ်ဖို့ အင်အားဖြည့်ရောက်လာခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ကို ထရပ်ကားတွေပေါ် တင်ဆောင်သွားကြတယ်။
သူတို့ကို ခေါ်ထုတ်သွားချိန်မှာ မိမိဟာ မိတ္ထီလာကို ဘယ်တော့မှ ပြန်မလာအပ်တော့ကြောင်း မောင်ကိုကို သိလိုက်ပါတယ် “ ကျွန်တော်တို့ကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ကယ်တင်လိုက်လို့သာ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့တာပါ ”။
ရှည်လျားတဲ့အိပ်မက်ဆိုးကနေလွတ်မြောက်လာသူများကို ရဲဌာနတစ်ခုဆီပို့ဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ ရေတောင်းသောက်တဲ့အခါ အရာရှိတစ်ဦးမက သူတို့ကို ရေတိုက်ကြတယ်။
ရှင်သန်ကျန်ရစ်တဲ့ မွတ်စ်လင်မ် ၁၂၀ ဦးထဲမှာ ကျောင်းသား ၉၀ နဲ့ ဆရာလေးဦး ပါဝင်တယ်။ သူတို့ဟာ အခြားမြို့က မိသားစုဆွေမျိုးတွေနဲ့ ပြန်လည်မဆုံစည်းမှီအထိ ရဲစခန်းမှာ ရက်အတန်ကြာနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
မိသားစုဝင်တွေ၊ သက်သေတွေနဲ့ မေးမြန်းစိစစ်ပြီးတဲ့နောက် စုစုပေါင်း ကျောင်းသား ၃၂ ဦးနဲ့ဆရာလေးဦး သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးက ဆိုပါတယ်။
ကယ်ထုတ်ရေးအတွက် အမိန့်ထုတ်ခဲ့တဲ့ ပြည်နယ်လုံခြုံရေးမှူး ကာနယ် အောင်ကျော်မိုးက လမ်းခုလတ်မှာ လူ ၁၀ ဦး သို့မဟုတ် ၁၅ ဦး သေဆုံးရတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဒါပေမယ့် အေပီသတင်းဌာနကရရှိထားတဲ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေအရ အဲ့ဒီအဆိုနဲ့ ဆန့်ကျင်လို့နေပါတယ်။ သတ်ဖြတ်မှုပြီးတဲ့နောက် အမည်မဖော်လိုသူမျက်မြင်သက်သေများက ဒေသတွင်းလှည့်လည်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းတွေပါ။ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းနှစ်ခုထဲမှာတင် လူအသေအပျောက် ၂၈ ဦးအထိ ပါဝင်နေပါတယ်။ ရုပ်အလောင်းအများစုရဲ့လက်တွေဟာ မိုးပေါ်ထောင်နေပြီး မီးလောင်ကျွမ်းထားတာတွေ့ရတယ်။ လူတစ်ဦးဆိုယင် ခေါင်းဖြတ်ခံထားရတယ်။
ရုပ်အလောင်းတစ်ခုအနီးလူတွေဖြတ်သန်းသွားလာရာမှာ “ ဟေ့။ ဒါက ကလေး(ရဲ့အလောင်း)လား ” လို့ တစ်ယောက်က မေးတယ်။ နောက်လူတစ်ယောက်က “ ဘယ်ကလာ။ အဲ့ဒါ ပိုင်းဖြတ်ခံထားရတာလေ ” လို့ ရယ်ပြောပြောခဲ့တဲ့အသံတွေကို ဗီဒီယိုရိုက်ချက်တွေထဲမှာ ကြားရပါတယ်။
အဲ့ဒီနေ့က ရဲတွေကိုင်တွယ်ထားကြတဲ့ သေနတ်တွေ၊ ရိုင်ဖယ်တွေကို လူရမ်းကားအုပ်စုတွေကိုင်တွယ်ထားကြတဲ့ သာမန်အသုံးအဆောင်လက်နက်တွေက ယှဉ်နိုင်စွမ်း မရှိကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လူ ၁၀၀ ကျော်ကို ကယ်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာ ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့သတ်ဖြတ်မှုကြီးကို မတားမြစ်ခဲ့ကြဘူး။
“ သူတို့ဆီမှာ စိတ်နှစ်ခွဖြစ်နေတာကို ကျွန်တော်တို့ သိလိုက်ရပါတယ်။ တစ်ချို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ကို ကယ်တင်ဖို့ ကြိုးစားကြတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာတော့ သူတို့အားလုံး ကျွန်တော်တို့သေမှာကိုဘဲ စောင့်ကြည့်ခဲ့တာပါ ” လို့ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးက ဆိုပါတယ်။
ဥပဒေသမား ဦးဝင်းထိန်က အကြောင်းရင်းနှစ်ရပ်ရှိနိုင်ခဲ့ကြောင်း သုံးသပ်တယ် “ ရဲတွေဟာ အထက်ကပစ်မိန့် လုံးဝ မရတာ ဖြစ်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဘာဆိုဘာမှမလုပ်ဖို့ အထက်က အမိန့်ရောက်နေတာ ဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ”။
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး လုံခြုံရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကျော်မိုး
ဒေသလုံခြုံရေးမှူး ဦးအောင်ကျော်မိုးကတော့ အထက်ကပစ်မိန့်ပေးထားတယ်လို့ အတိုက်အခံဆိုပါတယ်။ သို့ပေမင့် ရဲတွေ မပစ်ခတ်ရတာက ပစ်လိုက်လို့ရှိယင် လူအုပ်ရဲ့ဒေါသကို ဆွလိုက်သလိုဖြစ်ပြီး အခြေအနေ ပိုမိုဆိုးရွားသွားနိုင်တယ်လို့ သူက ပြောတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း “ အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာဆီ ရဲတပ်သား ၂၀၀ ကို စေလွှတ်ခဲ့တယ်။ လူအုပ်ကြီးက သူ့တို့ထက် အဆမတန် အင်အားများပြားနေခဲ့တယ်။ မွတ်စ်လင်မ်တွေ သေကြေရတာက တစ်ချို့လူတွေ ထွက်ပြေးကြလို့ဖြစ်တယ်။ သူတို့က ခြေဦးတည့်ရာ တကွဲတပြားပြေးကြတော့ ကျွန်တော်တို့တပ်သားတွေက လူတစ်ဦးချင်းနောက်ကို မလိုက်နိုင်ခဲ့ကြဘူး။ ကျန်တဲ့သူတွေကို စောင့်ရှောက်နေတဲ့အပေါ် သူတို့ သတိထားမိဖို့ကောင်းတယ်။ လက်တွေ့ရင်ဆိုင်မှုတွေမှာ အချို့ကိစ္စတွေက ရှင်းပြရသိပ်ခက်ပါတယ် ” လို့ ရှင်းလင်းပါတယ်။
ဦးအောင်ကျော်မိုးနဲ့ မိနစ် ၅၀ အကြာ အင်တာဗျူးခဲ့ရာမှာ သူက ရဲတွေရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်အပေါ် အားရကျေနပ်တယ်လို့ ဆိုခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် “ အသေးစိတ်လိုက်မမေးပါနဲ့။ ဒါဟာ မသင့်လျော်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒါက ၀တ္ထုရေးနေတာမဟုတ်ဘူး၊ ရုပ်ရှင်ရိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ ခင်ဗျားတို့ သိစရာမလိုဘူး ” လို့ ငါးကြိမ်တိုင်တိုင် ဒေါသသံနဲ့ ပြောခဲ့တယ်။
မိတ္ထီလာအကြမ်းဖက်မှုအတွက် ပထမဆုံး အရေးယူစီရင်ခံလိုက်ရတာက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူရမ်းကားတွေ မဟုတ်ဘဲ မွတ်စ်လင်မ်တွေ ဖြစ်နေခဲ့တယ်။
ဧပြီလ ၁၁ ရက်မှာ ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးကို တရားရုံးတစ်ခုက ခိုးမှု၊ အနာတရဖြစ်စေမှုနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၁၄ နှစ် ပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့တယ်။ မေလ ၂၁ ရက်မှာ အဲ့ဒီတရားရုံးကပဲ မွတ်စ်လင်မ် ၇ ဦးကို အခင်းစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့နေ့က ဘုန်းကြီးသတ်မှုကိစ္စနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်ကနေ တစ်သက်တစ်ကျွန်းအထိ အသီးသီး စီရင်ချက်ချခဲ့ပြန်တယ်။
တရားခံရှေ့နေ ဦးဥာဏ်မြင့်အဆိုအရ ဇွန်လ ၂၈ ရက်မှာတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးကို မိတ္ထီလာမြို့တွင်း မွတ်စ်လင်မ် တစ်ဦးကို သတ်ဖြတ်မှုနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ်ချမှတ်ခဲ့တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ၁၄ ဦးကို မင်္ဂလာဇေယုံသတ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်။ အချို့ဟာ လူသတ်မှုနဲ့အကျုံးဝင်သော်လည်း ဒီနေ့ထက်ထိ စီရင်ချက် မချမှတ်သေးကြောင်း “ တရားမျှတမှုကို အချိန်က သက်သေပြမှာပါ။ တရားရုံးတွေက ဘယ်အုပ်စုကိုမှ မျက်နှာမလိုက် အစွဲမထားဘဲ အမှုကို စစ်ဆေးစီရင်နေပါတယ် ” လို့ သူက ပြောပြပါတယ်။
လုံခြုံရေးအကြီးအမှူး ဦးအောင်ကျော်မိုး က ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသူအားလုံးဟာ မိတ္ထီလာဒေသခံတွေ ဖြစ်တယ် ဆိုတာကလွဲလို့ အသေးစိတ်ပြောကြားမှု မရှိပါဘူး။ အခြား ဘယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ကမှလည်း လိုလိုလားလား ထုတ်ဖော်ပြောကြားမှု မရှိတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။
အခြားသောမြို့တွေမှာလည်း အလားတူအတိုင်း စီရင်နေကြပါတယ်။
ဧပြီလအတွင်း ဥက္ကံမြို့နယ်က ရွာပေါင်းများစွာကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူရမ်းကားတွေ မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုမှာလည်း ပထမဆုံး စီရင်ချက်ချခံလိုက်ရသူကတော့ သာသနာကိုစော်ကားမှုနဲ့စတင်စွပ်စွဲခံရတဲ့ မွတ်စ်လင်မ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါ။ သူမက ကိုရင်ငယ်လေးတစ်ဦးရဲ့ သပိတ်ကို သွားတိုက်မိတာပါ။ အဲ့ဒါဟာ မတော်တဆမှုသက်သက်သာဖြစ်တယ်လို့ မွတ်စ်လင်မ်များက ဆိုကြပါတယ်။
ဒါတင်မကသေးဘူး။ မေလအတွင်း လားရှိုးမြို့ပေါ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့အကြမ်းဖက်ဖျက်ဆီးတိုက်ခိုက်မှုမှာလည်း ပထမဆုံးစီရင်ချက်ချခံရသူက မွတ်စ်လင်မ်အမျိုးသားတစ်ဦး ဖြစ်တယ်။ သူဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ဓာတ်ဆီလောင်းမီးရှို့ပြီး ဆိုးဆိုးဝါးဝါးလောင်ကျွမ်းစေခဲ့ရာမှ သောင်းကျန်းမှု စတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တယ်။
ဥက္ကံမှာရော လားရှိုးမြို့မှာပါ အနည်းဆုံး မွတ်စ်လင်မ်တစ်ဦး သတ်ဖြတ်ခံလိုက်ရသော်လည်း ဒီနေ့ထက်ထိ ဘယ်သတ်ဖြတ်သူကိုမှ အရေးယူစီရင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။
မိတ္ထီလာစုပြုံသတ်ဖြတ်မှုအပြီး အနည်းဆုံး နှစ်ရက်နဲ့တစ်ပိုင်းအထိ ရုပ်အလောင်းများကို ပုံပျက်ပန်းပျက် စွန့်ပစ်ထားကြတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှ အစိုးရဖက်က အလုပ်သမားတွေကို လွှတ်ပြီး နေရာရွှေ့စေခဲ့တယ်။ တစ်ချို့ကိုတော့ အမှိုက်ကားနဲ့တင်ဆောင်သွားကြတယ်။ ရုပ်ကလာပ်တွေကို မိတ္ထီလာသုသာန်ကြီးဆီကို ယူဆောင်သွားကြတယ်။ အဲ့ဒီကို ရောက်တဲ့အခါကျပြန်တော့လည်း ညစ်ပတ်နေတဲ့မြေနီကွင်းပြင်ထဲမှာ ကားတာယာတွေ၊ ဓာတ်ဆီတွေကိုသုံးပြီး မီးရှို့ကြပြန်တယ်။ ခွေးတွေဝင်တိုးစရာ ပြာပုံဘ၀ ရောက်သွားခဲ့ရတယ်။
ရုပ်အလောင်းတွေကို သက်ဆိုင်ရာသားချင်းတွေဆီလက်ပြောင်းပေးမှာ မဟုတ်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မခွဲခြား မမှတ်မိနိုင်လောက်အောင် ဆိုးဆိုးဝါးဝါး မီးလောင်ကျွမ်းထားလို့ဖြစ်တယ် ဆိုပြီး အာဏာပိုင်တွေက ပြောကြားတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကို မေးမြန်းပြောဆိုမှုအလျဉ်းမရှိခဲ့တဲ့အပြင် အစ္စလာမ့်ထုံးဓလေ့အရ ကောင်းမွန်ကျနစွာ မြှုပ်နှံသင်္ဂြိုလ်ခွင့်လည်း မပေးခဲ့ကြပါဘူးလို့ အသတ်ခံရသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်များက ဆိုပါတယ်။
ဘယ်မွတ်စ်လင်မ်မိသားစုကမှ သင်္ချိုင်းကို မသွားရဲကြသလို ၀ိုင်းဝန်းသတ်ဖြတ်တဲ့နေရာဆီကိုလည်း ခြေဦးမလှည့်ရဲကြပါဘူး။
ဗလာခြေကျင်းနဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦး ရေတွင်းတစ်ခုနံဘေးမှာ အ၀တ်လျှော်နေခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီနေရာမှာ မီးကျွမ်းနေတဲ့ ရုပ်အလောင်းတွေကို စုပုံချထားတာကို တွေ့လိုက်တော့ ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပါလိမ့်ဆိုပြီး တအံ့တသြဖြစ်သွားတယ်။ သူမ ရှိမနေခဲ့လို့ မသိလိုက်ရဘူးလေ။ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက “ ဘာကစဖြစ်တာလဲ ပြောပြလိုက်။ ရွှေဆိုင်အကြောင်း၊ ဘုန်းကြီး အသတ်ခံရတဲ့အကြောင်းတွေ ပြောပြလိုက် ” လို့ ဆိုပါတယ်။ မမြင့်ဟာ ခေါင်းကိုခါရမ်းလိုက်ပြီး တောင်ကုန်းထိပ်ဖက်ကို မ၀ံ့မရဲကြည့်လို့ “ ဒီအရိုးတွေက ငါနဲ့ဘာမှ မပတ်သက်ဘူးနော် ” လို့ ဆိုလိုက်လေရဲ့။
ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးက မျဉ်းပြာလိုင်းပါတဲ့စာရွက်တစ်ရွက်ကို သူ့အိတ်ကပ်ထဲက ထုတ်ယူလိုက်တယ်။ အဲ့ဒီစာရွက်ပေါ်မှာ သေဆုံးသွားသူတွေရဲ့ နာမည်၊ အသက်နဲ့ ဇာတိနေရပ်တွေကို ရေးသားထားတယ်။
သူ့ကျောင်းသားတွေကို ၀က်လန်တောထဲ သွားခိုလှုံဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ၊ အိပ်မက်ဆိုးအဖြစ်တွေ ကြုံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ မဟုတ်ဘဲ သတ်ဖြတ်ခံရချိန်မှာ မကယ်တင်နိုင်လိုက်တဲ့အတွက် သူ့မှာ စိတ်ထိခိုက်လျက် ရှိနေပါတယ်။ အရိုက်ခံရပြီး မြေပေါ်လဲကျကုန်တဲ့အချိန်မှာ အများစုက မသေဆုံးကြသေးဘူးလို့ သူက ပြောပြတယ်။
“ အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာ လူအုပ်ကြီးကိုနောက်ပြန်ဆုတ်အောင် တစ်စုံတစ်ယောက်သာ ရောက်လာခဲ့ပြီး သူတို့ကို သွားယူလို့ဆေးရုံပို့ပေးနိုင်ခဲ့ယင် သူတို့ အသက်ရှင်နိုင်ကြမှာပါ ” ဆိုပြီး ပြောပြရှာပါတယ်။
ရှင်သန်ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသား ၉၀ ကျော်ကို အဆင့်မရှိ လိမ်ညာမှုတွေ မလုပ်ကြဖို့၊ မတရားအပြစ်ပေးမှုကို ကြောက်ရွံ့ပြီး ၀န်ခံထွက်ဆိုတာမျိုး မလုပ်ကြဖို့ သူက မှာကြားထားပါတယ်။ သူ့အတွေးအာရုံထဲမှာ ကျောင်းသားတွေကို ပြန်လည်စုစည်းမယ်၊ တစ်နေရာရာမှာ ကျောင်းကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မယ် ဆိုပြီး ………………….။ ဒါပေမယ့်လည်း အချိန်မရွေး နေရာမရွေးမှာ ဒီလိုတစ်ဖက်သတ်အကြမ်းဖက်မှုတွေ ထပ်ဖြစ်လာမှာကိုတော့ အထူးစိုးရိမ်နေမိတာတော့ အမှန်ပါဘဲ။
“ ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘယ်နေရာမှာများ လုံခြုံဘေးကင်းနိုင်မှာလဲ ? ငါတို့ကို ဘယ်သူ ကာကွယ်ပေးမှာလဲ ” လို့ ပြောပါတယ်။
မတ်လ ၂၁ ရက်တုန်းက ကျောင်းသားတွေကို ပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်မှုမလုပ်ဖို့ ထိန်းသိမ်းတိုက်တွန်းခဲ့တာ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ပါ။ ခုတော့ သူက ဒီလို တိုးတိတ်စွာ ဆိုရပါပြီ။
“ နောက်တစ်ကြိမ်သာ ထပ်ဖြစ်လာယင် ငါတို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ရတော့မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဘယ်သူမှ လာပြီးကာကွယ်ပေးမှာမဟုတ်မှန်း ငါတို့သိသွားရလို့ပါဘဲ ”။
http://www.japantimes.co.jp/ တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် ဆောင်းပါးရှင် TODD PITMAN ၏ No Justice For Muslims Massacred By Myanmar Buddhists ဆောင်းပါးကို ” မြင့်မိုရ်မောင်မောင်” ဆီလျော်အောင် မြန်မာလိုပြန်ဆိုပါသည်။
ပုံ(၁) မိတ္ထိလာ အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ြဖတ်မှု
ပုံ (၂) ကျောင်းသားနှင့် ဆရာ ၄၀ ကျော် အသတ်ခံခဲ့ပြိး မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည့် မင်္ဂလာဇေယုံ အစ္စလာမ်ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်း ကွန်ပျူတာခန်း ၊အဆိုပါကျောင်းသည် ဘာသာရေးစာ နှင့်ခေတ်ပညာ ရပ်များကို တွဲဖက် သင်ကြားနေသည့် ကျောင်းဖြစ်သည်။ (လွန်ခဲ့သည့် ၃ နှစ်ကျော် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ရိုက်ကူးထားသည့် ဓါတ်ပုံဖြစ်ပါသည်)
ပုံ (၃) ကျောင်းသားနှင့် ဆရာ ၄၀ ကျော် အသတ်ခံခဲ့ရသည့် မင်္ဂလာဇေယုံ အစ္စလာမ်ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်း အပြင်ပိုင်း အစိတ်အပိုင်း မြင်ကွင်းတခု (လွန်ခဲ့သည့် ၃ နှစ်ကျော် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ရိုက်ကူးထားသည့် ဓါတ်ပုံဖြစ်ပါသည်)
ပုံ (၄) အကြမ်းဖက် မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရပြီးနောက် မင်္ဂလာဇေယုံ အစ္စလာမ့်ဘာသာရေးစာသင်ကျောင်း ..
ပုံ (၅) ရဲတွေရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်အပေါ် အားရကျေနပ်တယ်လို့ ဆိုခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် “ အသေးစိတ်လိုက်မမေးပါနဲ့။ ဒါဟာ မသင့်လျော်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒါက ၀တ္ထုရေးနေတာမဟုတ်ဘူး၊ ရုပ်ရှင်ရိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ ခင်ဗျားတို့ သိစရာမလိုဘူး
This entry was posted on March 21, 2015 at 2:41 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.